एनआईसी एशिया बैंक : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १७ जेठ २०७६)
बैंकले तेस्रो पटक ४४ लाख कित्ता ऋणपत्र जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको छ । बैंकले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा जेठ ६ गते निवेदन दिएको हो । ४४ लाखमध्ये बैंकले १७ लाख ६० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि र २६ लाख ४० हजार व्यक्तिगत संघ संस्थालाई जारी गर्न निवेदन दिएको हो । विक्रीप्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड छ ।
चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले रू. २ अर्ब २७ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४५ प्रतिशत बढी हो । बैंकले सो अवधिमा रू. ९२ करोड ७९ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । बिहीवार कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. ४८५ कायम भएको छ । यो मूल्य अघिल्लो दिनभन्दा ५ अंक बढी हो ।
2019-05-31 - 185 view(s) - abhiyan